यौन मानवजीवनको अभिन्न अंग हो
स्वास्थ्य/जीवनशैली 273 पटक पढिएको
७० प्रतिशत भन्दा माथी युवतीहरुलाई श्रीमानबाट किन यौन आनन्द मिल्दैन?जानी राखौ!! यौन जिज्ञासा पुरा पढ्नुहोला !
भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो, मानवजीवनका लागि प्रकृतिले नै दिएको । यौनेच्छा तपाईंमा एकदमै छ भन्ने प्रस्ट छ । तपाईंले आफूले यौनसम्पर्कबाट आनन्द प्राप्त गर्न नसक्नुभएको उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि प्रयास गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
योनिलाई कसरी कसिलो बनाउने ?
तपाईंले योनि ठूलो भएको कुरा गर्नुभएको छ, सम्भवत: तपाईंले योनि खुकुलो भयो भनेर लेख्न खोज्नुभएको होला भनेर, त्यसैअनुरूप जवाफ दिने प्रयास गरेको छु ।
अन्त्यमा योनि खुकुलोपनको समस्या अति नै छ भने vaginoplasty (भजाइनोप्लास्टी) शल्य चिकित्सा पनि गराउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो शल्य चिकित्सालाई सामान्यत: अन्तिम उपायका रूपमा लिइन्छ । अचेल त लेजर प्रविधिको प्रयोग पनि प्रारम्भ हुन थालेको छ । कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार
848017	Times Visited.